ကရင်ရိုးရာဝတ်စုံလေးနဲ့ စစ်ဘေးဒဏ်သင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကို စာနာကြောင်းပြသလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် မြနှင်းရည်လွင် – Bagan Thar
ကရင်ရိုးရာဝတ်စုံလေးနဲ့ စစ်ဘေးဒဏ်သင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကို စာနာကြောင်းပြသလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် မြနှင်းရည်လွင်
ပရိသတ်တွေကြီးရေဒီနေ့မှာတော့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရာမှာရဲရဲဝင့်ဝင်ပါဝင်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင်မြနှင်းရည်လွင်ကတော့ နှစ်ရည်လများစစ်ဘေးဒဏ်သင့်တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှစ်တွေကို စာနာသောအားဖြင့် အားလုံးကိုဒီကမ်ပိန်းလေးမှယပါဝင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။မြနှင်းရည်လွင်ကကျမချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဝတ်စုံကိုဝတ်ပြီး စစ်အာဏာရှင်ဘေးကို ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအားလုံးသဘာဝဘေး၊လူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘေးတွေ အားလုံးကနေကင်းဝေးစေကြဖို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်။ဒီဘေးဆိုးတွေကနေကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ကျမအားလုံးနဲ့အတူတူရှိနေပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဘေးကိုအတူတူကျော်လွှားကြမယ်။
အခု ကျွန်မတို့တိုင်းပြည်ဟာသဘာဝဘေးကပ်ရောဂါဘေးတွေသာမကစစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့လူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘေးဒဏ်ကိုပါ ဆိုးဆိုးရွားရွားခံစားနေကြရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်စစ်ဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြန်မာပြည်အနှံ့ကတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေနဲ့ တစ်သားတည်းအတူခံစားနေရကြောင်းနဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းဖို့၊ဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုကူညီစောင့်ရှာက်ဖို့အတွက်ပြည်သူအားလုံးကအတူကြိုးစားနေကြောင်းပြဖို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေလျှော့ချရေးနေ့ဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာလ၁၃ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မယ့်ဒီကမ်ပိန်းလေးမှာအတူပါဝင်ပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၁၃ရက်နေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)မှာ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံကိုဝတ်မယ်၊ ပြီးရင်လူသားချင်းစာနာမှုကိုပြသတဲ့အဓိပ္ပါယ် နဲ့ ညာဘက်လက်ကိုဘယ်ဘက်နှလုံးသားပေါ် တင်၊ တော်လှန်ရေး သင်္ကေတ လက်၃ချောင်းထောင် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ မျှဝေရင်းဒီ ကမ်ပိန်းမှာ ပါဝင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံကကိုယ်စားပြုလူမျိုးကဘာလဲ၊အဲဒီဒေသတွေမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့အတူတကွရှိနေပြီးစာနာထောက်ထားအားပေးကူညီတာတွေလုပ်နေပါတယ်စတဲ့ နှစ်သက်ရာ caption နဲ့ OnlyTogether DRRDay2021Myanmar StopManmadeDisasterinMyanmar ဆိုတဲ့ hashtag စာသားလေးတွေကိုတွဲတင်ပေးပြီး ဒီကမ်ပိန်းမှာ အားလုံးပါဝင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ Only together, Can we save the planet!Only together, Can we win the democracy! ဆိုပြီးပြောပြထားတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
မြနှင်းရည်လွင်ကကျမချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဝတ်စုံကိုဝတ်ပြီး စစ်အာဏာရှင်ဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့တိုင်းရင်းသာညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေအားလုံး သဘာဝဘေး၊လူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘေးတွေ အားလုံးကနေ ကင်းဝေးစေကြဖို့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်။ဒီဘေးဆိုးတွေကနေကျော်လွှားနိုင်ဖို့ကျမ အားလုံးနဲ့ အတူတူရှိနေပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဘေးကို အတူတူ ကျော်လွှားကြမယ်။
အခု ကျွန်မတို့တိုင်းပြည်ဟာသဘာဝဘေးကပ်ရောဂါဘေးတွေသာမကစစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့လူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘေးဒဏ်ကိုပါ ဆိုးဆိုးရွားရွားခံစားနေကြရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်စစ်ဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့မြန်မာပြည်အနှံ့ကတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေနဲ့ တစ်သားတည်းအတူခံစားနေရကြောင်းနဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းဖို့၊ဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုကူညီစောင့်ရှာက်ဖို့အတွက်ပြည်သူအားလုံးက အတူကြိုးစားနေကြောင်း ပြဖို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေလျှော့ချရေးနေ့ ဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာလ ၁၃ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မယ့် ဒီ ကမ်ပိန်းလေးမှာ အတူပါဝင်ပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၁၃ရက်နေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)မှာ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံကိုဝတ်မယ်၊ ပြီးရင်လူသားချင်းစာနာမှုကိုပြသတဲ့အဓိပ္ပါယ် နဲ့ ညာဘက်လက်ကိုဘယ်ဘက်နှလုံးသားပေါ် တင်၊ တော်လှန်ရေး သင်္ကေတ လက်၃ချောင်းထောင် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ မျှဝေရင်းဒီ ကမ်ပိန်းမှာ ပါဝင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံကကိုယ်စားပြုလူမျိုးကဘာလဲ၊အဲဒီဒေသတွေမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့အတူတကွရှိနေပြီးစာနာထောက်ထားအားပေးကူညီတာတွေလုပ်နေပါတယ်စတဲ့ နှစ်သက်ရာ caption နဲ့ OnlyTogether DRRDay2021Myanmar StopManmadeDisasterinMyanmar ဆိုတဲ့ hashtag စာသားလေးတွေကိုတွဲတင်ပေးပြီး ဒီကမ်ပိန်းမှာ အားလုံး ပါဝင်ပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ Only together, Can we save the planet!Only together, Can we win the democracy! ဆိုပြီးပြောပြထားတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
သူဝတ်ဆင်ထားတဲ့ စိန်နားကပ်ကိုချွတ်ပြီး ဘုရားဌာပနာအတွက် လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ဆယ်လီ ကျော်ကျော်နန္ဒ
မအောင်မြင်ခင်ကတည်းက ဘေးနားမှာ အတူရှိနေပေးခဲ့တဲ့ မိတ်ကပ်ဆရာကို ပြန်လည်ကျေးဇူးဆပ်ခဲ့တဲ့ နှိုင်းယှဥ်မြင့်မိုရ်